ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): August 2009
The Buddha remembered his past lives. Even today there are monks, nuns and others who can remember their previous existences. Suchastrong memory isaresult of deep meditation and mental training. For those who can recall their past lives, the idea of rebirth becomes an established fact which puts this present life inameaningful perspective.
The law of kamma can only be fully understood in the framework of many lifetimes, because sometimes it takes this long for kamma to bear its fruit.
Rebirth is not limited merely to the human realm. The Buddha taught that the realm of human beings is but one among many. In addition there are realms of heavens, hells, animals and ghosts. Depending on the kamma one has accumulated, one may be reborn into any of these. Understanding this brings upasense of empathy and respect for the lives of all beings.
Because no realm is permanent, the repetitive cycle of birth and death and the wandering on from realm to realm is inherently unsatisfying. Eventually one seeksaway out. By following the Noble Eightfold Path to its culmination of enlightenment, the process of rebirth ceases completely.
Posted by The Bliss Of Emancipation at 5:00 AM0comments Links to this post
ယခုလိုရခဲလှသော လူ့ ဘ၀ကြီးကို ရနေရုံတင်မကဘဲ ကြုံခဲလှသော ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံနေတုန်း ဒါနကို ဧရာတည်၊ သီလဖြင့် တန်ဆာဆင်၊ ဘာဝနာဖြင့် အထွဋ်တင်ပြီးတော့ အခွင့်ကောင်းကြီးကို လက်မလွတ်ကြစေနဲ့ ။ အရယူတတ်ကြပါစေ။
ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီသူတော်စင်တွေ တရားစခန်းဝင်ပြီး အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေ နည်းမှီးပြီး ခန္ဓာဥာဏ်စိုက်၍ ၀ိပဿနာတရားတွေ ကြိုးစားကျင့်ကြံနေတာဟာ မိမိတို့ ရဲ့ကုသိုလ်လှေရွက်ကြီးကို အထက်ကို ဆန်တက်အောင် ပြုလုပ်နေကြတာပဲ။ နိဗ္ဗာန်ထိအောင် ဆန်တက်ကြရမယ် မဟုတ်လား။
ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီသူတော်စင်တွေ ဘာကြောင့် တရားအားထုတ်ရတာလဲလို့မေးရင် အရိယာ သူတော်ကောင်းကြီတွေ မြင်တော်မူ၊ ရတော်မူတဲ့ သန္တိသုခ နိဗ္ဗာနဓာတ် (အငြိမ်းဓာတ်) ကြီးကို ရပြီး အိုနာသေဇာတ် အမြစ်ပြတ်ချင်လို့တရားအားထုတ်ရခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ဖြေရပါလိမ့်မယ်။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 11:49 PM0comments Links to this post
The Buddha said, "Monks, kamma is intention." According to the natural law of kamma (or karma), there are inescapable results of our intentional actions. Certain acts, things said or thought will lead to hurting others or harming oneself if the intention behind them is unwholesome. This 'bad kamma' is motivated by selfish desire, anger or delusion. Because the result is unpleasant and painful, wise people don't follow impure intentions. Similarly there are actions, speech and thoughts which stem from wholesome intentions. This 'good kamma' leads to the well-being of both oneself and others. Motivated by generosity, compassion, clarity of understanding and other positive states of mind, wise people cultivate and follow up on their pure intetions.
Much, though not all, of what one experiences is the result of one's previous kamma. So when one finds oneself in an unpleasant situation, rather than projecting blame on others one can examine one's own past conduct and take responsibility for the causes that led up to the situation. Likewise when one is feeling happy, instead of taking it for granted one looks to understand the previous causes and conditions that brought it about. Understanding how happiness originates encourages further good kamma.
The Buddha pointed out that no being, divine or not, has the power to stop the consequences of good or bad kamma. One reaps exactly what one sows. So if you want to be wealthy, then be generous, hard-working and trustworthy. If you want to go to heaven, be virtuous, be kind and meditate. If you want to be enlightened, develop insight based on deep peace of mind.
The only escape from the results of kamma is enlightenment. Until then however, it is possible to attenuate the severity of the consequences of bad kamma by increasing the good. The Buddha gave the simile ofaspoon of salt mixed inaglass of water compared toaspoon of salt mixed inalarge river. The glass of water becomes undrinkable while the taste of the water in the river is hardly affected. Similarly, the results of bad kamma foraperson only doingasmall amount of good kamma is very painful, while the result of the same bad kamma foraperson habitually doingagreat deal of good kamma is much less severe.
Understanding this natural law of cause and effect leads to an ethical, compassionate and wise life. Furthermore,awider embracing of the law of kamma would lead any country towardsastronger, more caring and virtuous society.
Posted by The Bliss Of Emancipation at 6:43 AM0comments Links to this post
နိဗ္ဗာန်အယူအဆကို ထေရ၀ါဒ ရှုထောင့်မှလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (ဆရာတော် ဦးဓမ္မပိယ Ph. D.)
Sayadaw U Dhammapia, Ph. D.
Posted by The Bliss Of Emancipation at 6:10 AM0comments Links to this post
The path to the ending of all suffering is called the Middle Way because it avoids the two extremes of self-indulgence and self-torment. Such extreme behavior does not lead to peace of mind. This pathway consists of cultivating virtue, meditative serenity and wisdom and is further elaborated as the Noble Eightfold Path:
1. The perfection of understanding: right view of the basic truths of existence.
2. The perfection of intention: thoughts motivated by loving-kindness, compassion and renunciation.
3. The perfection of speech: truthful, harmonious, gentle and meaningful.
4. The perfection of behavior: non-violence, not stealing and responsible sexual conduct.
5. The perfection of employment: earningaliving inaway that does not harm or exploit others or oneself.
7. The perfection of conscious awareness: mindfulness of ones body, feelings, mind and objects of mind.
When all eight factors of the path are brought to maturity, one penetrates the true nature of existence with insight and reaps the fruit of the Buddha's teachings: perfected wisdom and unshakable liberation.
The central teaching of the Buddha, around which all his other teachings revolve, is the Four Noble Truths:
1. Life involves suffering. All beings are subject to old age, sickness and death. They will inevitably experience some disappointment, discomfort, sadness, anxiety or pain.
2. The root cause of suffering is craving for sensual pleasure, for existence, for non-existence or for things to be different than they are. Craving is fueled by likes and dislikes, driven by the illusion of 'me' and 'mine', which in turn is due to misunderstanding the true nature of reality.
3. Suffering ends with the ending of craving. This is the attainment of enlightenment, Nibbana (or Nirvana). Enlightenment is the complete letting go of the illusion ofapermanent and independent self or soul. An enlightened person is called an Arahant.
Buddhism isarealistic religion in that it faces up to the fact of life's many imperfections, and optimistic in that it offersapractical solution: enlightenment in this very life.
Because all things that arise fromacause are inaconstant state of change, they are inherently unable to provide permanent happiness or reliable satisfaction. Grasping and clinging onto any aspect of experience leads to friction, stress or disappointment when those things, people or situations fade and disappear. As long as suffering is seen as something unnatural or abnormal that is to be feared, avoided or rejected, it will be impossible to uproot its causes and liveatruly happy life. To the degree that the subtle and all-pervasive nature of suffering is recognized, one can accept and be free from it. This is why the reflection on suffering is emphasized as the key to ultimate liberation, and those who have realized enlightenment are inspiring examples of profound happiness, loving-kindness and compassion.
သရဏဂုံစွဲ၊ သီလမြဲ၊ ဘာဝနာလဲတွဲ။ သံသရာ အရေးမျှော်ကာတွေး နောင်ရေးအေးအောင် ကြိုးစားကြ။
အခွင့်ကောင်းကို လက်မလွတ်ကြစေနဲ့ 
ယောဂီသူတော်စင်များအားလုံး လူ့ ဘ၀ရခိုက် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီး နဲ့တွေ့ ကြုံနေခိုက်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ လည်း ပြည့်စုံနေတုန်း အခွင့်အခါကောင်းကို လက်မလွတ်ကြစေဘဲ၊ ၀ိပဿနာဘာဝနာတရားကို ကြိုးစားအားထုတ်သင့်ကြပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးကသတိပေးပါတယ်။
ယောဂီသူတော်စင်တွေ တရားမှတ်တဲ့အခါမှာ ကိုက်ခဲညောင်းညာ ဝေဒနာပေါ်လာပြီဆိုရင် ဝေဒနာရှောင်ခွာနည်း ( ၃ ) မျိုး ရှိတယ်။ ပူးကပ်ခွာ၊ ရှောင်ခွာ၊ နဲနဲလေးဣရိယာပုတ်ကို ပြင်ပြီးတော့ခွာ၊ နောက်ဆုံးနည်းကတော့ အာစရိယ၀ါဒအရ အညံ့ဆုံးဝေဒနာခွာနည်းဖြစ်တယ်။
ဝေဒနာနုပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်း စီးဖြန်းတဲ့အနေဖြင့် ဝေဒနာရဲ့ သဘောသိအောင် ဝေဒနာရဲ့ နောက် အသာကပ်လိုက်သွားပြီး ရှုမှတ်ပွားများခြင်းကို ဝေဒနာကို ပူးကပ်ခွာနည်းခေါ်တယ်။ မူရင်းအမှတ် ၀င်လေထွက်လေကိုပဲ စိတ်စိုက်ပြီးတော့ ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကို ဂရုမစိုက်ဘဲ မှတ်နေခြင်းကို ဝေဒနာရှောင်ခွာတဲ့နည်းလို့ခေါ်တယ်။ ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကို မခဲသာတဲ့အဆုံး မှတ်စိတ်ကလေးနဲ့ဣရိယာကိုပြင်ပြီးတော့ မှတ်ခြင်းကိုတော့ အညံ့ဆုံးဝေဒနာခွာနည်းလို့မှတ်ရမယ်။
အထက်တွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သမျှမှာ အောက်တွင် ရေးသားဖော်ပြလတ္တံ့ သော အကြောင်းအရာများအတွက် ပဏာမပျိုးလိုက်ခြင်းမျှသာ ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဟောတော်မူခဲ့သည့် တရားတော်များ၏ အဆီအနှစ် အကျဉ်းချုပ်မှာ ရုပ်ဓမ္မ၊ နာမ်ဓမ္မတို့ ၏ သဘော သဘာဝတ္တ အစစ်အမှန်ကို သိမြင်ကြစေခြင်းအတွက်မျှသာ ဖြစ်၏ ။ လောကဟူသည် ဘယ်မျှလောက် ကျယ်ဝန်းသည်ဖြစ်စေ၊ လိုရင်းအချူပ်၌ ရုပ်နှင့် နာမ်မျှသာ ရှိ၏။ တစ်နည်းဆိုသော် ခန္ဓငါးပါးမျှသာ ရှိ၏။ ခန္ဓငါးပါးအနက်တွင်လည်း တစ်ပါးပါးကို ယထာဘူတကျကျသိလျှင် ကိစ္စပြီးနိုင်သည်ဟု ဟောတော်မူ၏ ။
ရုပ်အကြောင်းကို ကျယ်ဝန်းစွာသိကြသော လောကဓာတ်ဆရာကြီးများ၊ စိတ်အကြောင်းကို အသေးစိတ်သိကြသော စိတ်ပညာဆရာကြီးများသည် အဘယ့်ကြောင့် အရိယာတွေ ဖြစ်မကုန်ကြဘိသနည်း။ အထက်ပါ ကျွန်မသည် စိတ်အကြောင်းကို တစ်ချက်တည်း သိမြင်လိုက်ကာမျှနှင့် အဘယ့်ကြောင့် သောတာပန် ဖြစ်ပါလေသနည်း။ ပညာရှိကြီးများ၏ သိခြင်းသည် ယထာဘူတမကျ၊ ကျွန်မ၏ သိခြင်းသည် ယထာဘူတ ကျခြင်းကြောင့် ဟူ၍ ဖြေဆိုရပေမည်။
အကြင်သူသည် အဘယ်မျှလောက် ဦးနှောက်ကောင်း၍ ရုပ်အကြောင်း၊ သို့ မဟုတ် စိတ်အကြောင်းများကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် တစ်သက်ပတ်လုံး စဉ်းစားဆင်ခြင်စေကာမူလည်း ( ဗုဒ္ဓ အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်း ) ယထာဘူတကျကျ သိမြင်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။ လောကီပညာရှိကြီးတစ်ယောက်ကားဖြစ်လာနိုင်ပေသည်။ သို့ သော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဖြစ်လာနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။ ကိုယ့်နည်းနှင့်ကိုယ် ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သည် ဆိုလျှင်လည်း ( ဗုဒ္ဓ၏ ကျမ်းဂန်များအရ ) ပစ္စေကဗုဒ္ဓတစ်ဆူ ဖြစ်လာရပေတော့မည်။ သို့ ဆိုလျှင် ရုပ်
သို့ မဟုတ် စိတ်အကြောင်းကို ယထာဘူတကျကျ သိမြင်အောင် ဘယ်ကဲ့သို့ ပြုလုပ်ရပါမည်နည်း။
ရုပ်တရား နာမ်တရားတို့ ၏ သဘာဝကို ထိုးထွင်းမြင်နိုင်စေခြင်းငှာ နည်းအမျိုးမျိုး ဟောတော်မူခဲ့သည့်အနက် ကျွန်ုပ်အလွန်နှစ်သက်၍ ယုံယုံကြည်ကြည် လေ့လာခဲ့သောနည်းမှာ ဘာဟိရနှင့် မာလုကျပုတ္တတို့ အား ဟောပြတော်မူခဲ့သည့် “ ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ ” ဟူသော နည်းပင်ဖြစ်သည်။
မြင်ကာ မတ္တ၊ ကြားကာ မတ္တဖြင့် ပြီးဆုံးစေ၍ ရှည်လျားစွာတောက်လျှောက်ကြီး လိုက်မသွားရအောင် အားထုတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် (နံပါတ် ၁ ဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြခဲ့ဖူးသည့်အတိုင်း ) မိမိ၏စိတ်ကို ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်အပေါ်တွင် ထားနိုင်သော အလေ့အကျင့် ရင့်ကျက်လာပေလိမ့်မည်။ အချိန်ကာလ အားဖြင့် ပစ္စုပ္ပန်၊ ဋ္ဌာနအားဖြင့် ဤနေရာ ( now & here ) မှတပါး အခြားသို့ စိတ်ရောက်မသွားစေရအောင် “ သတိ ” ကို မွေးမြူရသည်။ လွန်လေပြီးသော အတိတ်အကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ မိမိရှိနေသော ဋ္ဌာနမှတပါး ထိုထိုသောအရပ်၊ ထိုထိုသောနေရာများအကြောင်းကို လည်းကောင်း စိတ်ကူးတွေးတောခြင်း မပြုလုပ်မိစေရန် “ သတိ” ဖြင့် စောင့်ထိန်းရသည်။ ဤအလုပ်သည် လွယ်ကူသလို ထင်ရသော်လည်း လုပ်ကြည့်သောအခါ မလွယ်ကူပုံ အခြင်းအရာကို နံပါတ် ( ၁ ) ဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြခဲ့လေပြီ။
“ ကြားကာမတ္တ၊ မြင်ကာမတ္တ ” တည်းဟူသော လုပ်ရပ်၏ အဖိုးတန်ပုံမှာ ဤသို့ တည်း။
ကြားလိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက်၊ မြင်လိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် အာရုံနောက်သို့ လိုက်၍ ရှည်လျားစွာ စဉ်းစားနေကြသော ( သတ္တ၀ါတို့ ၏ သံသရာတစ်လျှောက်လုံး ) အလေ့အကျင့်ကို အထိုက်အလျောက် ချိုးနှိမ်နိုင်သောအခါ အကြင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်၏ စိတ်သည် ကြားသောအခိုက်တွင် “အသံ” အပေါ်၌သာ ပြီးဆုံးသွား၏ ။ မြင်သောအခိုက်တွင် “ အဆင်း ” အပေါ်၌သာ ပြီးဆုံးသွား၏ ။ နံသောအခိုက်တွင် “အနံ” အပေါ်၌သာ ပြီးဆုံးသွား၏။ စားသောအခိုက်တွင် “အရသာ” အပေါ်၌သာ ပြီးဆုံးသွား၏။ ထိတွေ့ သော အခိုက်တွင် “အတွေ့ ” အပေါ်၌သာ ပြီးဆုံးသွား၏ ။
အဆင်း၊ အနံ့ ၊ အသံ၊ အရသာ၊ အတွေ့ ဟူသော သဘာဝများသည် စင်စစ်အားဖြင့် ပရမတ် သဘောတရား များသာ ဖြစ်ကြ၏။ သို့ သော် အကြင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ် တို့ သည်၎င်းတို့ ကို ပရမတ် သဘောတရားဟူ၍ ပိုင်းပိုင်းခြားခြား သိမြင်နိုင်သေးသည် မဟုတ်ချေ ။ ဤလုပ်ရပ်၏ တန်ဖိုးရှိခြင်းမှာကား အဆင်းသက်သက်၊ အသံသက်သက် အစရှိသည်တို့ အပေါ်၌ချည်း စိတ်ကိုထားတတ်ဖို့သတိနှင့် အလေ့အကျင့်ပြုလုပ်ခြင်းသည် ( ပရမတ် သဘောတရားမှန်း မသိမြင်သေးစေကာမူလည်း) ပရမတ် သဘောတရားပေါ်မှာချည်း ထားမိလျက်သား ဖြစ်နေလေတော့သည်။ ဥပမာ ရွှေတုံးတွေဟူ၍ မသိသေးစေကာမူလည်း ရွှေတုံး တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်သို့ ခြေချလျက်သား ဖြစ်နေခြင်းနှင့် တူပေတော့သည်။
အကြင် ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည် ပါရမီရင့်သန်၍ အဆင်းသက်သက် အသံသက်သက်မျှ အပေါ်မှာချည်း ထားနိုင်အောင် လေ့ကျင့်နိုင်သော “ ဇွဲ ” ရှိသည်ဆိုငြားအံ့။ တစ်ကြိမ်တစ်ခါတွင် အဆင်းဓာတ်၊ အသံဓာတ်တို့ ၏ ပရမတ်ဆတ်ဆတ် သဘောကိုဖြစ်စေ၊ သို့ တည်းမဟုတ် စက္ခုဝိညာဏ်စိတ်၊ သောတ၀ိညာဏ်စိတ်တို့ ၏ ပရမတ္တသဘာဝကို ဖြစ်စေ ( အထက်ဖော်ပြပါ ကျွန်မကဲ့သို့ ) ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:39 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 3:13 AM0comments Links to this post